काठमाडौँका यी चार रुट जहाँ बन्ने भए केवलकार, हेर्नुस कुनकुन ठाउँ परे ? || सुनौलो नेपाल
काठमाडौँका यी चार रुट जहाँ बन्ने भए केवलकार, हेर्नुस कुनकुन ठाउँ परे ?
जेठ १०, काठमाण्डौ । काठमाडौं उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबलबार सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले केबलकार संचालनका लागि गृहकार्य थालेको हो ।
भर्खरै सकिएको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनले १५ अर्ब लगानी गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको हो ।
प्रतिवेदनमा कालिमाटीबाट बसन्तपुर–रत्नपार्क–डिल्लीबजार–भन्डारखाल–चाबहिल हुँदै बौद्धनाथ पुग्न पहिलो केबलबार रुट प्रस्ताव गरिएको छ । यो ७ किलोमिटरको रुटमा ७ वटा स्टेशन राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई तत्कालै पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउने योजना छ ।
गोंगबुबाट बालाजु–सोह्रखुट्टे–कालिमाटी–बल्खु–त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म पनि चलाउन सकिने भन्दै प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै कलंकीबाट टेकु–थापाथली हुँदै रत्नपार्कसम्म पनि केबलकार चलाउन सकिने अध्ययनले ठहर गरेको छ । लगनखेलबाट पुल्चोक(थापाथली(रत्नपार्कसम्मको रुटमा पनि केबलबार चलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनमा एउटा स्टेशनबाट केबलकार चढेपनि जुन ठाउँमा ओर्लिए पनि ४० रुपैयाँ भाडा लिने उल्लेख छ ।
केबलकार निर्माणका लागि स्टेशनहरु बनाउन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।